Indawo yabucala/ecocekileyo/ezolileyo/eKholeji eLungelelekileyo - I-Airbnb
Indawo yabucala/ecocekileyo/ezolileyo/eKholeji eLungelelekileyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguWren
Ikhaya kude nekhaya! Coca imigangatho yegadi eneefestile ezininzi kunye nokukhanya. Gqibezela ikhitshi elikhanyayo elinefriji, imicrowave, iwasha ye-oveni / isomisi. Wifi. Ifakwe ngokuthe ngqo kwenye yeendlela ezininzi ezithandekayo zokuhamba zaseNorthfield, iimayile ezi-2 ukuya edolophini, iimayile ezi-2.3 ukuya kwiKholeji yaseCarleton, iimayile ezi-3.1 ukuya kwiKholeji yaseSt Olaf. Okujoliswe kuko/Ukutya phakathi kweemayile ezi-1.5. Kuthuleke cul de sac. Ukupaka ngaphandle kwesitrato.
Nge-AirBNB nganye ukufumana amaxabiso enyanga, kufuneka ubhukishe ubuncinane iintsuku ezingama-28. Ubuncinci beentsuku ezi-3 zokuhlala kwiimpelaveki zokuphumelela izidanga zasekholejini.
Zonke izinto eziyimfuneko ekhaya. Igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlala elikhulu, ibhedi elingana nokumkanikazi. Igumbi lokuhlala elibanzi, igumbi lokuhlambela elineshawari. Iziko elincinci lombane lokufudumala okongeziweyo kunye ne-ambience. Indawo yekhitshi entsha ene-walkout ukuya kwipatio yangasemva. Coca kwaye ikhanyiswe kakuhle. Indawo enoxolo nendalo. Indawo yangaphakathi nangaphandle ekhoyo yokusabalalisa kunye nokuphumla. Umnyango wabucala. Yabucala YONKE INTO!
Indawo ebumelwaneni inxulunyaniswe nomzila obanzi wokuhamba wedolophu okhokelela edolophini nakwizikolo. Inosapho oluzivayo kuyo, ikwindawo ezolileyo kakhulu kwaye ikufutshane nombindi weekholeji, ivenkile kunye nendawo ephakathi kwedolophu.
Umbuki zindwendwe ngu- Wren
Ngokuncinci okanye unxibelelwano oluninzi njengoko iindwendwe zam zikhetha. Ndihlala kwindawo eyahlukileyo yokuhlala. Ndonwabile ukuphendula imibuzo okanye ukunika iingcebiso njengoko bendihlala kwaye ndisebenza apha iminyaka engama-20+. Ubumfihlo bakho bubaluleke njengam!
Ngokuncinci okanye unxibelelwano oluninzi njengoko iindwendwe zam zikhetha. Ndihlala kwindawo eyahlukileyo yokuhlala. Ndonwabile ukuphendula imibuzo okanye ukunika iingcebiso njeng…